के अब गृहमन्त्रीले आफ्नै पार्टी अध्यक्षका घरवेटीलाई कारबाही गर्लान त? - चन्द्रागिरि न्युज
Home अपराध के अब गृहमन्त्रीले आफ्नै पार्टी अध्यक्षका घरवेटीलाई कारबाही गर्लान त?
के अब गृहमन्त्रीले आफ्नै पार्टी अध्यक्षका घरवेटीलाई कारबाही गर्लान त?
२०७५, २३ जेष्ठ बुधबार ०१:३२
काठमाडौं । कलंकी–नागढुङ्गा सडक निर्माण कार्यको निर्धारित ठेक्का समय सकिए पनि सडक निर्माणमा प्रगति नभएपछि स्थानीयहरु आक्रोशित छन् । सरकारले त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक (१२ किमि) निर्माणकालागि २०७२ साउनमा मुख्य ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई ३० महिने समय तोकेर ठेक्का दिएको थियो । करिब एक अर्व रुपैयाको लागतमा निर्माणकार्य भइरहेको सो सडक खण्डको निर्माणकार्य करिब ४० प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ ।
सडक विस्तार आयोजना अहिले विस्तारका क्रममा रहेका १० वटा रणनीतिक सडकमध्ये ६ वटा सडकमा ६ सय २ घरको मुद्दा परेको छ । कूल मुद्दा १४ वटा भए पनि एक जनाको नेतृत्वमा १ सय २० जनासम्मले मुद्दा हालेमा सबैभन्दा बढी मुद्दा पर्नेमा कलंकी–नागढुंगा सडकमा ८५ जना छन् । ठेकेदार कम्पनी शैलुङले घरजग्गाको मुआब्जाको विवादले काम सुस्त भएको दावी गर्दै आएको छ । तर, काम गर्न सहज वातावरण भएका स्थानमा पनि सडकको हालत उस्तै छ । अनेक बाहनाबाजी झिकेर काम हुन सक्ने क्षेत्रमा पनि अल्झाएर राखेको सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
कलंकीदेखि ३ किलोमिटर अघिसम्मको सडक शर्मा शैलुङ कान्छाराम जेभीले २०७४ असोज सम्म निर्माण सक्नु पर्ने थियो । यसपछिको तीन किलोमिटर सडक लुम्बिनी शैलुङ साप जेभीले जिम्मा लिएको छ । नागढुंगातर्फको सडक शर्मा शैलुङ कान्छाराम जेभीले निर्माण गर्दैछ । यो सबै काम ढिलासुस्त हुनको दोष निर्माण कम्पनी राज्यका निकाय र सर्वसाधारणको अवरोध देखाएको छ ।
सो सडकखण्डमा पानी परेकाबेला हिलाम्य हुने र घाम लागेकाबेला धुलाम्य हुने समस्याले नागरिकहरु निकै सास्ती खेप्न बाध्य छन् । कलंकी–नागढुंगा (९ किमी) सडकमा सबैभन्दा समस्या भएको कालीमाटी, सतुंगल, गर्जुधारामा घरहरु भत्काउन बाँकी रहेको छ।
को हुन् ठेकेदार अधिकारी ?
कन्स्ट्रक्सनका मालिक ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारी वाम शक्तिलाई मिलाउनेमध्येका एकजना व्यक्ति हुन् । उनकै घरमा अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड डेरा लिएर बसेका छन् । अहिले पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड उनकै खुमलटारस्थित घरमा बसेका छन् ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले च.न.पा वडा नम्बर २ ले आयोजना गरेको फ्रि वाईफाई वडा घोषणा कार्यक्रममा काममा आल्टाल गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कार्भाही अघि वढाईसकेकोले अब चुप लागेर नवस्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूको दिनगन्ती सुरु भएको बताउनुभएको थियो।